Raj kummar Rao Muxuu Sameyn Lahaa Hadii Kangana Iyo Karan Johar Uu Meel Iskula Xirmi Lahaayeen! - Hablaha Media Network
Raj kummar Rao Muxuu Sameyn Lahaa Hadii Kangana Iyo Karan Johar Uu Meel Iskula Xirmi Lahaayeen!
HMN:- Atooraha abaal marinta National Film Awards ku guuleestay Rajkummar Rao waxaa Jimcadaan tiyaatarada loo saaray filimka Trapped.
Hadaba Rajkummar Rao filimka Trapped kaligiis ayuu jilayaa wuxuuna ku matalaa sheeko ah in xidigaan ku xirmaayo qol uu ka dagan yahay dabaq dheer oo cidlo ah kadibna wuxuu weynaa qof qolka ka furo.
Madaama Rajkummar Rao uu xanuun badan arkay sameynta filimka Trapped iyo dhibaatada ay leedahay in meel cidlo ah kugu xirmato atoorahan su’aal xasaasi ah ayaa la weydiiyay.
Rajkummar Rao waxaa la weydiiyay waxa uu sameyn lahaa hadii hal meel ay kula xirmi laheyd asiga, Kangana Ranaut iyo Karan Johar.
Rajkummar Rao wuxuu ku jawaabay “Daawade ayaan noqon lahaa waxaana fiirsan lahaa labadooda (Kangana iyo Karan) waxa ay sameyn lahaayeen!”
“Waayo in meel kugu xirmato wax ka dhib badan malahan madaama ay iga fir fircoon yihiin waxa ay sameyn lahaayeen ayaan indhaha ka daawan lahaa hadii ay la imaan lahaayeen xal meesha looga bixi karo ama hadii ay is dagaali lahaayeen!”
Dabcan Karan Johar iyo Kangana Ranaut dagaal culus ayaa dhex yaalo madaama labadaan shaqsi dhawaan weerar dhanka afka isku qaadeen.
Kangana ayaa Karan ku eedeesay inuu jilaayaasha u kala eexdo sidoo kalena uu soo dhaweesto kuwa qaraabadiisa ah ama kuwa uu fanka kusoo daray oo kaliya.
Karan Johar isagana wuxuu Kangana ugu jawaabay inay Bollywood-ka isaga baxdo hadii aysan dadka la heshiin karin sidoo kalena ay tahay qof dhibane ah oo jilaa kasto afka suraneyso ayadoon ogeyn waxa ay gar u leedahay ama looga leeyahay!